युट्यूबरहरू कै कारण टुहुरा बनेका ११ बालबालिका, बालकेयरकि पुष्पा आमाकाे सुनुवाइ अझै भएन किन? – PathivaraOnline
Home > समाचार > युट्यूबरहरू कै कारण टुहुरा बनेका ११ बालबालिका, बालकेयरकि पुष्पा आमाकाे सुनुवाइ अझै भएन किन?
admin September 8, 2020 समाचार, समाज	0
काठमाण्डौं,भदौ २३ । पुष्पा अधिकारीले संचालन गरेको केयर बाल गृहमा रहेका ११ बालिका राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले उठाएको आज १ महिना नाघेको छ । महिना बिती सक्दा पनि केयर बालगृहका तर्फबाट सर्वोच्व अदालतमा हालेको रिटको फैसला हुन सकेको छैन । बालिकाहरुको सर्वत्तम हितका लागि भन्दै परिवारलाई नै जिम्मा लगाउन कम्मर कसेको परिषदलाई पनि यतीबेला ती बालिकाहरु निल्नुन ओकल्नु जस्तै भएको छ । देश कोरोना सँग लडी रहेको छ ।
बिभिन्न जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा जारी छ । उक्त बालिकाहरुका अभिभावक नत काठमाण्डौमा छन नत राजधानी बाहिर लान सक्ने स्थिती छ र पनि सरोकार निकाय भन्छ जुनसुकै हालतमा बालिकाका आफन्तहरुलाई जिम्मा लगाइने छ । ती बालिकाहरु अध्ययन गर्ने बिद्यालयका प्रधानाध्यापकका अनुसार नियमित पढ्ने र जेहेन्दार विद्यार्थी रहेको कुरा स्पष्ट पारेका छन । रेखदेख र हेरचाहमा कुनै कमी नरहेको पनि बालिकाहरुको दैनिक कृयाक्लापले प्रस्ट पारेको छ ।
केयर बाल गृहको जुन कोठामा बसेर भबिश्यको मिठो सपना बुनेका ती बालिकाहरुले आज सोही घर र संचालिका पुष्पालाई चिन्दैनौ भन्न थालेका छन ।
आखिर यो कसरी भयो त ?
जो कोहिले पनि जिज्ञासु भएर गोत्लिंदा उद्दारका नाममा बालिका उठाएर लागेका सरोकारवालाहरुकै पहलमा सम्भव हुन सक्ने सजिलै अनुमान गर्न सक्छ । उमेरका अनुसार जस्लाई आफ्नै आमा बाबु र परिवारजनका बारेमा सही बिवरण थाहा छैन, सही नाम र ठेगाना थाहा छैन, ती बालिकाहरुले आज सहजरुपमा आफ्ना परिवार र आफ्नो जन्म स्थान भन्न सक्छन । फर्केर त्यही गाउँमा जान चाहन्छु भन्छन ।
“केयर बाल गृह” जहाँ उनीहरुले जीवनका सुख दु:खका समय बिताए,आफुले अध्ययन गर्ने कलमकापी छुटाए । यहाँ सम्म की आफुले लगाउने चप्पल समेत लगाउन नदिएर उठाए । त्यो घर र आमा सरह नै पालनपोषण गरिरहेकी पुष्पा अधिकारीलाई चिन्दिन भन्न सिकाउनु
कतिकाे न्याय र जायज हो ?
हाँस्ने खेल्ने र जीवन सुन्दर बनाउने सपना सजाउने घर नै चिन्दैन भन्ने पाठ सिकाउने शक्ती घर नामक ‘हिमाली नबिन समाज’ संस्था कस्तो होला, झनै कुतुहलता जागेको छ । त्यसैले यतिबेला ती अबोध बालिकाहरुलाई कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो भन्ने पाठ नै सिकाउन सक्ने,बालिकालाई अस्थाई आश्रय दिने ‘हिमाली नबिन समाज’ पनि संकाको घेरामा परेको छ । किनकी कसैको स्वार्थका लागि सामाजिक दायित्व बोकेकेको संस्था र त्यहाँ रहेका कर्मचारी प्रयोग हुनु राज्यका लागि घातक हुन सक्छ ।
सरोकारवाल निकायले अपहरण शैलिमा उठाएका बालिका कुनै दिन त्यो कैदखानाबाट बाहिर आउनासाथ स्वतन्त्र भई आफु हुर्केको ‘केयर बाल गृह’ र पुष्पा अधिकारी बारे सकारात्मक कुरा ओकल्न थाले भने के हविगत होला “हिमाली नबिन समाज” नामक संस्था र सरोकारवाला निकायको ।
युट्युबरको क्षणिक स्वार्थमा प्रयोग हुँदा अनावश्यक बदनाम भएकी पुष्पाले ढकढक्याएको न्यायलयको दैलो र न्यायमुर्तीको कालो पट्टी भित्रको सत्य तथ्य फैसलाको पर्खाईमा सर्वसाधारण पनि पक्कै होलान । त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
गत साउन २१ गते राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले ११ बालिका असुरक्षित भएको भन्दै केयर बाल गृहबाट उद्दार गरे पछी सो बाल गृह कि अध्यक्ष पुष्पा अधिकारी र परिषद बिचको मुद्दा सर्वच्च अदालत सम्म पुगेको हो ।